Wasiir Goodax oo weeraray Xildhibaanada dhaliilay la wareegista Iskuulka 15 May | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Wasiir Goodax oo weeraray Xildhibaanada dhaliilay la wareegista Iskuulka 15 May
Wasiir Goodax oo weeraray Xildhibaanada dhaliilay la wareegista Iskuulka 15 May
Cabdullaahi Goodax Barre, Wasiirka Waxbarashada Somaliya ayaa si kulul u weeraray Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ee dhaliilay tallaabada ay Dowladda Federaalka kula wareegeyso Iskuulka 15 May ee Magaalada Muqdisho.
Dugsiga Sare 15 May oo ku yaala Degmada Warta Nabadda ayaa waxaa tan iyo sanadkii 2015 gacanta ku hayay Ergada Waxbarashada Masaarida ee Somaliya. Wasaaradda Waxbarashada Somaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in iskuulkaasi loo bedeli doono Dugsiga Macalimiinta Gabdhaha, oo soo saari doono hablaha macalimiinta ka noqonaya Dugsiyada Hoose & Dhexe ee dalka.
Xildhibaanada tallaabadan dhaliilay ayaa sheegay in go’aanka Ergada Masaarida looga wareejinayo 15 May School uu yahay cadaadis Dowladda Federaalka uga yimid Itoobiya, xilli Itoobiya iyo Masar uu ka dhaxeeyo murun la xiriira Biyaha Webiga Nile.
Wasiirka Waxbarashada oo la hadlay BBC, waxna laga weydiiyay eedeymaha kaga yimid Xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay in uu Xildhibaanadaasi u arko inay yihiin kuwo siyaasadda ka dhacay.
“Waan arkaayay barraha bulshada iyo mareegaha arrimaha Soomaalida Xildhibaano ka hadlayo. Aniga Xildhibaanadaas siyaasadda ka dhacay in dowladnimada iyo wadanimadooda ay aad u hooseyso ayaan aaminsanahay inay yihiin.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri “In go’aan iskuul ku yaala Xamar ee aan ugu daneynayno dadkeena, hawlaheenana ku qabsanayno ay yiraahdaan dowladda amaraa laga soo siiyay meel, waa u wadanimo xumo, waana u dadnimo xumo, waxay rabaanoo kale ha sameeyaan, laakiin inay tacliinta siyaasadeeyan, ay sidaa qaabka daran u siyaasadeeyan, waa u dadnimo xumo.”
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Soomaalidana waa bislaatay, siyaasadda saas u guracanoo u raqiiska ah cidna ka dhageysan mayso.”
Waxa kaloo uu sheegay inaanay Itoobiya wax u yeerin karin Somaliya, balse ay Itoobiya tahay dal ay deris yihiin, oo sharaf iyo qiimaba ay u hayaan.
“Anaga Itoobiya wax nooma sheegto, waa dal aan sharaf iyo qiimo u hayno oo deris nahay, laakiin Iskuul 15 May ayaa nin Itoobiya jooggo oo asaagooda soo amraayo oo dhahaayo iskuulkaas la wareeg, waxaasu waa fadhi ku dirir oo aad raqiis u ah. Waana ka xumahay in maanta Xildhibaan Qaran oo wadanka wax badan iyo hami uu ka suggaayo inuu caqliyadda noocaas oo raqiiska ah uu la yimaado.” Ayuu yiri Wasiirka Waxbarashada Somaliya.
Wasiir Goodax ayaa umadda Soomalaiyeed u sheegay in Masar ay tahay dowlad ay saaxiibo yihiin, isla-markaana ay u baahan yihiin taageeradeeda, ha yeeshee ay taageerada noqon doonto mid ku saleysan rabitaanka Somaliya.
“Umadda Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinaa Dowladda Masar waa dowlad aan walaalo nahay, saaxiib nahay, taariikh fiicana aan leenahay. Macalimiintooda iyo taageeradooda runtii waan u baahanahay, laakiin hadba saan wax ugu baahanahay ayaa nagula shaqaynayaye, anaga war suuq kuma shaqayno. Anaga danteena waa carruurta Soomaaliyeed, meeshaas ayay indhaheyno ku wajahan yihiin.” Ayuu yiri Godax.